Jadwalka Qiimaynta - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Kalandarka Imtixaanka Degmada 2020-2021
Macluumaadka waxaa laga daawan karaa hoos qiimeynta kala duwan ee gobolka, oo ay weheliso taariikhaha daaqada imtixaanka, maadada, heerka fasalka iyo waqtiga qiimeynta la qiyaasay. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa PDF kalandarka imtixaanka.
Qiimeynta soo socota ee gobolka oo dhan waxaa loogu talagalay barashada shaqsiyan. Tilmaanta hadda ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay muujineysaa in imtixaanadan la qaadi doono oo keliya haddii qaabka barashada ay ku jiraan shaqsiyaadka maalmaha waxbarida ee imtixaanada la qaadi karo. Taariikhaha imtixaanka waxaa loo waafajin doonaa hadba sida loogu baahdo, iyadoo lagu saleynayo isbeddelada ku yimid qaabka bixinta waxbarashada.
ACCESS ee ELLs 2.0
ACCESS badal ah oo loogu talagalay ELLs
Qiimaynta Dhamaystiran ee Minnesota waa qiimeyn khadka tooska ah laga helo oo ka kooban xulashooyin iyo waxyaabo farsamo sare loo qaaday.
Si loo cabbiro horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee Minnesota lana buuxiyo shuruudaha Sharciga Waxbarashada Hoose iyo Sare ee federaalka (ESEA).
Isha laga rabo: Shuruucda Minnesota, qaybta 120B.30 iyo ESSA
Taariikhaha - Akhriska iyo Xisaabta
Daaqada imtixaanka gobolka: Maarso 8 - Maajo 7, 2021
Ardayda dugsiga hoose
Akhrinta: Abriil 14, shaqsiyan wax u barta oo keliya; Abriil 15 iyo 16, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
xisaabta: Abriil 20 iyo 22, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
Ardayda dugsiga dhexe
Akhrinta: usbuuca Abriil 19, ardayda wax ku barta; Abriil 21, bartayaasha fogaanta
xisaabta: usbuuca Abriil 19, bartayaasha shaqsi ahaan; Abriil 21, bartayaasha fogaanta
akhriska: Abriil 14, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
xisaabta: Abriil 21, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
Akhrinta - fasalada 3-5: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa 2 1/2 ilaa 3 1/2 saac
Akhrinta - fasalada 6-8: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa 2 1/2 ilaa 3 1/2 saac
Akhrinta - fasalka 10aad: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa 2 ilaa 3 saacadood
Xisaab - fasallada 3-5: waqtiga qiimeynta la qiyaasay waa 1 1/2 ilaa 2 saacadood
Xisaab - fasallada 6-8: waqtiga qiimeynta la qiyaasay waa 2 illaa 2 1/2 saacadood
Xisaab - fasal 11: waqtiga qiimeynta la qiyaasay waa 1 1/2 ilaa 2 1/2 saacadood
Taariikhaha - Sayniska
Daaqada imtixaanka gobolka: Maarso 8 - Maajo 14 2021
Ardayda dugsiga hoose: Abril 27 iyo 29, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
Ardayda dugsiga dhexe: usbuuca Abriil 19, shaqsiyan wax u barta; Abriil 28, bartayaasha fogaanta
Ardayda dugsiga sare: Abriil 28, masaafada iyo shaqsiyan wax u barta
Saynis, fasalka 5aad: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa 1 1/2 ilaa 2 saacadood
Sayniska, fasalka 8: qiyaasta waqtiga qiimeynta waa 1 1/2 ilaa 2 saacadood
Sayniska, dugsiga sare (guud ahaan fasalka 10aad): waqtiga qiimeynta lagu qiyaasay waa 2 ilaa 2 1/2 saacadood
Natiijooyinka loo soo diray qoysaska, waxaana laga heli karaa bogga internetka horraantii Sebtember.
Imtixaanka Minnesota ee Xirfadaha Tacliineed waa qiimeyn ku-meel-gaadh ah oo ku-saleysan wax-qabad loogu talagalay ardayda leh naafonimada xagga garashada ugu weyn.
Taariikhaha - Akhriska, Xisaabta iyo Sayniska
Daaqadda Imtixaanka: Maarso 8 - Maajo 7, 2021
Tijaabada waxaa loo qaadaa si shaqsi ah sidaa darteed taariikho cayiman lama dhajin karo.
Akhrinta - fasalada 3-8 iyo 10: waqtiga maamulka wuu ku kala duwan yahay arday kasta
Xisaab - fasalka 2-8 iyo 11: waqtiga maamulku wuu ku kala duwan yahay arday kasta
Sayniska - fasalada 5, 8 iyo dugsiga sare: waqtiga maamulka arday walba wuu ku kala duwan yahay.
Fasalada 1-12, kani waa kumbuyuutar ku saleysan, imtixaan la qabsi ah oo ka jawaabaya waxqabadka ardayga waxaana lagu maamuli karaa koox ahaan ama goob shaqsiyeed. Imtixaanka xanaanada caruurta waa qiimeyn ku saleysan warqad oo shaqsi ahaan loo maamulo.
Si loo cabiro aqoonta luuqada Ingiriisiga ee ku saleysan Heerarka Minnesota ee Horumarinta Luqadda Ingiriisiga iyo in la buuxiyo shuruudaha federaalka ee Sharciga Ku-guuleysiga Arday kasta.
Isha laga rabo: ESSA
Taariikhaha - Akhriska, Qoraalka, Dhageysiga iyo Hadalka
Daaqada tijaabada: Janaayo 25 - Maarso 19, 2021
Taariikhaha gaarka ah ee dugsiga ayaa lagu dhajin doonaa websaydhka dugsi kasta.
Akhriska, qorista, dhageysiga iyo ku hadalka - Xanaanada: waqtiga qiimeynta lagu qiyaasay waa 45 daqiiqo (shaqsi gooni ah ayaa loo maamulaa)
Akhrinta - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 35 daqiiqo
Qorista - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 65 daqiiqo
Dhageysiga - fasalada 1-12: waqtiga qiimeynta la qiyaasay waa ilaa 40 daqiiqo
Hadalka - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 30 daqiiqo
Qiimeyn aqoonta shaqsiyeed ee luuqada Ingriisiga ah ayaa loo sameeyay barteyaasha Ingiriisiga ee leh naafonimo xagga garashada ah.
Akhrinta - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 20 daqiiqo
Qorista - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 20 daqiiqo
Dhageysiga - fasalada 1-12: waqtiga qiimeynta la qiyaasay waa ilaa 20 daqiiqo
Hadalka - fasalada 1-12: waqtiga qiimaynta lagu qiyaasay waa ilaa 20 daqiiqo
Qiimeynta Gobolka Loo Baahan Yahay
ACT waxay ka kooban tahay afar manhaj ku saleysan, imtixaano kala-doorasho badan oo Ingiriisiga, xisaabta, akhriska iyo sayniska ah. Imtixaanka 'ACT' waa mid degmadu maamusho - imtixaanka gelitaanka kulliyadda ee qaran ahaan laga aqoonsan yahay waa in la helaa inta lagu jiro maalinta dugsiga ee ardayda fasalka 11 iyo 12 ee doonaya inay ka qaybgalaan. Dugsiyada Robbinsdale Area, ardayda guud ahaan waxay ku galaan imtixaankan fasalka 11.
20-21 Tilmaamaha Qorsheynta ee Dugsiyada Dadweynaha MN (8/21/2020) kama aysan hadlin gobolka loo baahan yahay guga 2021 maamulka ACT. Qaybtaan waa la cusbooneysiin doonaa markii macluumaadka la helo.
Isha laga rabo: Shuruucda Minnesota, qaybta 120B.30
Maarso 2, 3021
Xisaabta, Akhriska, Ingiriiska iyo Sayniska
Waqtiga qiimeynta la qiyaasay
Tijaabi 1 - 45 daqiiqo
Tijaabi 2 - 60 daqiiqo
Fasax - 15 daqiiqo
Tijaabi 3 - 35 daqiiqo
Tijaabi 4 - 35 daqiiqo
Jebi 5 daqiiqo
Natiijooyinka waraaqaha ACT waxay u diraan guryaha 6 toddobaad illaa 8 toddobaad baaritaanka ka dib.
Qiimeynta soosocota ee soosocota waxaa loogu talagalay maamulka shaqsi ahaan. Imtixaannadan waxaa la qaadanayaa oo keliya haddii qaabka barashada ay ku jiraan shaqsiyaadka qofka wax loo barayo ee imtixaannada la qaadi karo. Taariikhaha imtixaanka waxaa loo waafajin doonaa hadba sida loogu baahdo, iyadoo lagu saleynayo isbeddelada ku yimid qaabka bixinta waxbarashada.
Deg Deg Deg Akhriska iyo Xisaabta (Pre-K)
DHAQSIGA Akhriska hore iyo Xisaabta hore (Xanaanada - Fasalka 1)
Akhriska degdega ah iyo Xisaabta (Fasalada 2-8)
Si loo cabiro awooda guud iyo xirfadaha halista ah ee akhriska hore iyo xisaabta (qiimaynta shaqsi ahaan loo maamulo).
Maajo 4 - 29, 2021
Akhriska iyo Xisaabta
Pre-K (4 sano jir)
8 daqiiqo ardaykiiba
Natiijooyinka waxaa la heli karaa hal toddobaad ka dib marka uu xirmo daaqadda imtixaanka.
Sebtember 8 - Nofeembar 30, 2020
Diisambar 1, 2020 - Maarso 26, 2021
Abriil 5 - Maajo 28, 2021
Xanaanada caruurta iyo fasalka 1aad
Akhrinta degdega ah iyo Xisaabtu waa tijaabooyin la-qabsi kumbuyuutar oo lagu cabbiro xirfadaha akhriska iyo xisaabta ballaaran. Imtixaannadan waxaa loogu talagalay baaritaanka guud si loo aqoonsado ardayda halista ugu jirta dib-u-dhaca tacliinta iyo in lagu wargeliyo macallimiinta maadaama ay ku kala duwan yihiin waxbaridda ardayda oo dhan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu saadaaliyo waxqabadka qiimeynta gobolka.
Dugsiyadu waxay xushaan taariikho cayiman
Fasalka 2 (dayrta, jiilaalka iyo gu'ga)
Fasalada 3-8 (deyrta iyo jiilaalka)
20-35 daqiiqo maadadii
Si loola socdo ku-habsashada akhriska iyo horumarka (qiimaynta shaqsi ahaan loo maamulo).
5 daqiiqo ardaykiiba
Si loogu aqoonsado ardayda barnaamijyada iyo adeegyada hibada / hibada leh.
Fasalada 2-5: Febraayo 1 - 26, 2021
Fasalada 3-5 (ardayda ku cusub degmada) Dayrta 2020
Fasalada 2-5: warqad loo diray ardayda uqalma bisha May
Ardayda ku cusub degmada ee lagu imtixaanay Dayrta 2020: warqad loo diray ardayda uqalma Nofeembar
Daraasad ku baahsan degmada oo dhan
Sahankan waxaa lagu maamuli karaa jawi waxbarasho fog. Sahanka Ardeyda Degmadu waxaa loogu talagalay ardayda dhigata fasalada 4-12, iyadoo daaqada sahanka ay furantahay Febraayo 17-26, 2021.